Ekhishini Ne-Hansgrohe: Ikusasa Lokugeleza Okuhlakaniphile Kokusebenza Nge-Aquno Khetha i-M81 - Infoial | I-VIGA Faucet Manufacturer - I-VIGA Faucet Manufacturer
Ikhaya Blog Ekhishini nge-hansgrohe: Ikusasa lokuhamba komsebenzi okuhlakaniphile nge-Aquno Select M81 - Inforial
Ekhishini nge-hansgrohe: Ikusasa lokuhamba komsebenzi okuhlakaniphile nge-Aquno Select M81 - Inforial
Idethi: 2020-09-11 Izigaba:Blog
Ngaphakathi ekhishini nge-hansgrohe: Indlela eya phambili yokuhamba komsebenzi okunengqondo nge-Aquno Khetha i-M81 - Okokufundisa
Ngompompi wayo wasekhishini omusha we-Aquno Khetha i-M81, i-hansgrohe yethula uhlelo olusha sha olwakhelwe ngaphakathi oluqukethe ukwakheka komkhiqizo okungavumelani nokubhanqiwe ngemishini yokufafaza okuqhubekayo nemishini eyenziwe ngezifiso - yabapheki abafisa ukupheka nabathandi bokudla abaphekelwa ngabaningi kunokumane nje balungiselele ukudla okulungiselelwe .
Uhlelo olwakhelwe ngaphakathi i-Aquno - oluqanjwe nge- “aqua” kanye ne- “unit” - lwenza ukuthi kutholakale ukuthola ubuchwepheshe bohlobo olusha kakhulu lokuhlangana namanzi ngaphakathi ekhishini; futhi ngenxa yomqondo wayo onengqondo owakhelwe ngaphakathi, ikhetha izindlela zokufafaza namakhono afanele noma yimuphi umsebenzi owenziwayo.
Ngesikhathi sokuqala, izindlela zokufafaza i-laminar nokugeza ngaphakathi kwesifutho sokudonsa zihambisana nemodi yesifutho yesithathu, eyisicaba futhi emnene kakhulu, egeleza isuka kuyunithi eyakhelwe ngaphakathi.
Imodi yesifutho se-SatinFlow iqukethe ama-jets amaningi womuntu athayipha ukunyakaza okubambekayo kodwa okuminyene kwe-laminar. Isifutho asinachaphaza futhi siqinisekisa ukuthi amanzi ageleza ngokulinganayo ngaphezu kokudla, iminwe nezinto. Imikhiqizo entekenteke efana nezithelo, imifino nemifino yesaladi ziyayithanda le ompompi, njengoba kwenza nabathandi bekhishi abafuna ngenkani.
Ukugeza okulingene: Umpompi omusha wasekhishini u-hansgrohe Aquno Khetha umugqa wekhishi we-M81 uhlaba umxhwele ngemodi yokufafaza kwawo eyi-SatinFlow. (./.)
Konke okukodwa kokuhamba komsebenzi okunobungani kusinki
I-hansgrohe Aquno Khetha umpompi wasekhishini we-M81 iyahlaba umxhwele ngemodi yayo yokufafaza ne-SatinFlow yokuphamba ebabazekayo, nokuyinto entsha ngaphakathi kokuhweba kwasekhishini. Iyunithi engezansi eyenza ukwehla kwengxenye yamakhono ompompi njenge- "geza" yezithelo nemifino: Ispout sayo side futhi sincane futhi sikhiqiza ukunyakaza okukhulu kwamanzi.
Ngenxa yokuhlangana kwenoveli kanye nezinhlobonhlobo zamabhulashi wesifutho, i-hansgrohe Aquno Khetha i-M81 ngokungeziwe iqinisekisa ukusatshalaliswa okuthambile kwamaconsi. Ngenxa yalokhu kudla kuzogezwa ngokuphelele futhi ngendlela ngobumnene. Ngesisefo semisebenzi eminingi, esifakiwe ngaphakathi kwesethi futhi senzelwe ukuhambisana ngokuphelele ngaphansi kwesifutho esikhulu, uhlelo lwompompi luqinisekisa ukuhamba komsebenzi okulula nokwemvelo kusinki.
Ngisho nezinto ezinkulu, ezifana namashidi okubhaka, zizogezwa nge-spout enkulu, ngoba izimboza ngokuphelele ngamanzi; kanti iSatinFlow ingonga kakhulu izinsiza ngoba ukusetshenziswa kwamanzi kumane kungu-4 litre ngomzuzu.
I-laminar jet yesifutho sokudonsela phansi inenani lokuhamba lamalitha ayisikhombisa ngomzuzu, ikwenze kutholakale ukugcwalisa amabhodwe kungekudala futhi ugeze iminwe ngokushesha ngamanzi alahlekile; futhi ngenxa yohlobo lwayo lokwehla, imodi yokufafaza ilungile ekuhlanzeni ukudla okuthe xaxa nokugeza izitsha phakathi kokusebenzisa.
Ukusebenza kwesifutho sokudonsela phansi kuyahlukahluka okungamasentimitha angama-76 ngokungeziwe kunika inkululeko yokuhamba, kunika amandla umpompi wokusetshenziswa kude nosinki. Lokhu kwenza kube lula, ngokwesibonelo, ukugcwalisa amanzi ngqo emshinini we-espresso obekwe kude le.
Ukweba ukugqama: Idizayini yayo yesikhathi esizayo kanye nokuzitika nokukhethwa kobujamo obuyisisekelo kwenza i-hansgrohe Aquno Khetha i-M81 isidonsi sangempela esihlangana kunoma imuphi umuntu othile nendawo ekhishini eyinkimbinkimbi. (./.)
Ukwenza imisebenzi eminingi ngamanzi
Ukusebenza kwempompi kalula kungamangalisa njengomphumela womklamo wayo ohlakaniphile nezindawo okulula ukuzihlanza. Okuwukuphela kwesivumelwano sokubhekana naso ngakwesokunene sesisekelo sompompi nenkinobho yokukhetha ngakwesobunxele inika amakhasimende ukuphatha okuphathekayo nokunembile kwazo zonke izinketho ze-M81.
Umklamo wayo wesikhathi esizayo nowokuzitika nokukhethwa kobujamo obuyinhloko kwenza i-hansgrohe Aquno Khetha i-M81 isidonsi sangempela esihlangana nomuntu othile nendawo ekhishini eyinkimbinkimbi. Ukwahluka okukodwa kuhambisana nomphimbo omile njengo-L. Ipayipi le-angled spout ligcizelela ukwakheka okuqondile komkhiqizo ojwayelekile futhi kufaka phakathi ukudonswa phansi ngejet laminar.
Okunye okunye okwehlukile kwe-M81 kufaka ukufaka umqubuko we-arc ephezulu ogcizelela ukusebenzisana kwe-monolithic kobujamo obunxande nxazonke. Ikhanda lokudonsela phansi linezinhlobo ze-jet eziguquguqukayo, okuvumela ukusetshenziswa kwamanzi okuhlukahlukene.
Thola okungeziwe maqondana ne-hansgrohe Aquno Khetha i-M81 ku hhobang-yweb.com noma uthumele imibuzo yakho ku [i-imeyili ivikelwe]
Okuphambili: Amaphrojekthi obhadane akhiqizayo ayaqhubeka nokuhlaba umxhwele | Izindaba & Schmooze
Next: Ukuhlaziywa Kwemakethe Yompompi Wamanzi, Amathrendi, Isibikezelo, 2019-2025 - Iphethwe
* Igama lakho:
* Uhlobo lwebhizinisi: Ukungenisa / Ukuthengisa ngaphakathi OEM / ODM Ngokwezifiso / Ukuthengisa E-commerce Osonkontileka Ukusabalalisa